एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष द्वारा १७ बर्षिया किशोरी बलात्कृत, घटना लुकाउन पिडितलाई धम्कि दिएको खुलासा ! – RadioMBC
Home > विचित्र संसार > एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष द्वारा १७ बर्षिया किशोरी बलात्कृत, घटना लुकाउन पिडितलाई धम्कि दिएको खुलासा !
३१ बैशाख २०७५, सोमबार २१:०८
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट घिरिङ गाउँपालिका–३ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित झकबहादुर कुमालमाथि १७ बर्षिया किशोरीलाई बलात्कार गरेर उक्त घटना बाहिर नल्याउन धम्कि दिएको आरोप लागेको छ । घिरिङ–४ गड्यौलीटारकी स्थानीय विवाहित किशोरीमाथि कुमालले नवलपरासी बर्दघाट पूर्वसुस्तास्थित जंगलमा गत मंगलबार बलात्कार गरेको आरोप छ । ती किशोरीलाई धम्क्याएर बलात्कार गरेको र कुमालले घटना बाहिर नल्याउन भन्दै दुई हजार रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पीडितका परिवारमार्फत घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले कुमाल सम्पर्कविहीन छन् ।
पीडित किशोरीले घटना बाहिर नल्याउन कुमालले दिएको धम्कीका बाबजुद शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएकी छन् । प्रहरीमा उनले दिएको जाहेरीअनुसार कुमालले घटनाबारे कसैलाई नभन्न भनेका थिए । तर, उनले दिदी र सासूलाई घटनाबारे बताएकी थिइन् ।
घटना सार्वजनिक नगर्न पैसाको प्रलोभन र धम्की आएपछि आफू बिहीबार मध्यरातमा आफन्तसँग जाहेरीका लागि दमौली आएको पिडित किशोरीले बताइन् । शुक्रबार जाहेरी संकलनपछि प्रहरीले पीडित महिलाको बयान लिएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ , आफ्ना सहयोगीमार्फत वडाध्यक्षले निरन्तर धम्की दिइरहेको पिडित किशोरीले बताएकी छन् ।